सिभिल बैंकको हकप्रद शेयर लिलाममा माग भन्दा अधिक आवेदन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > सिभिल बैंकको हकप्रद शेयर लिलाममा माग भन्दा अधिक आवेदन
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले २५% हकप्रद शेयर लिलामीमा माग भन्दा अधिक बढी निवेदन परेका छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको चुक्तापूँजी रु. ८ अर्ब पु¥याउन बुझाएको पूँजी योजना बमोजिम बैंकले सो हकप्रद शेयर वितरण गरेका हो । शेयर बिक्रीप्रबन्धका लागि लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लि.लाई नियुक्त गरेको थियो । जस मध्ये संस्थापक समूहको आवेदन नपरेको २९,९२,२१०.२५ कित्ता हकप्रद शेयर बिक्रिको लागि मिति २०७५÷०२÷०९ सम्म शिलबन्दी बोलपत्र माग गरीएकोमा, कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनिको आवेदन परेको बैंकले जनाएको छ ।
कुल ३२,२५,६२० कित्ता शेयरको लागी आवेदन परेकोमा अधिकतम बोली रु १५० र न्यूनतम बोली रु १०० परेको छ । यससंगै बैंकको चुक्तापूँजी रु सात अर्ब पच्चिस करोड त्रियानब्बे लाख दश हजार तीन सय बैसठ्ठी पुग्ने कुरा बैंकले बताएको छ ।
आ.व. २०७४÷७५ को चैत्र मसान्तसम्म २००,००० भन्दा बढी ग्राहकहरु रहेको, करीब रु.३७अर्वको निक्षेप परिचालन गरी करीव रु.३६ अर्वभन्दा बढीको कर्जा लगानी गर्नुका साथै रु ३५ करोड खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको सिभिल बैंकको कुल शाखा संख्या ६१ पुगेकोे पनि बैंकले जनाएको छ ।
सिभिल बैंकले संचित मुनाफाबाट बोनस शेयर वितरण गरी अपुग चुक्ता पूँजी पु¥याउने कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताउनु भयो ।
२०७५ जेठ १० गते प्रकाशित
२०७५ जेष्ठ १० गते २०:५४ मा प्रकाशित
विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? सबै विवरण थाहा पाउन क्लिक गर्नुहोस वैदेशिक रोजगार ‘एप’
नयाँ आर्थिक वर्षलाई सेयर बजारले बढेर गर्यो स्वागत !
के भनिएको छ आचार्य समुहको २४ बुँदे प्रतिबद्धतामा ?
विकास बैंकका सेयरधनीलाई खुसीको खबर,२० प्रतिशत बोनसपछि २१४ प्रतिशत हकप्रद !
सिभिल बैंकको खुद नाफा ५० प्रतिशतले बृद्धि